iCloud Keychain တွင်သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုရန်။ | ငါက Mac ပါ
iCloud Keychain တွင်သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုရန်
iCloud Keychain သည်ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည်။ မတူညီသော iOS နှင့် OS X တို့၏မွမ်းမံမှုများသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ICloud Keychain သည် operating system နှစ်ခုလုံးတွင် 1Password မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည် သော့ခတ်စနစ်အားစနစ်အတွင်းထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်အသုံးပြုရန်ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည် ဘာစကားဝှက်တွေလဲ
ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကို ၀ င်ရောက်တိုင်း Keychain သည်စကားဝှက်ကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည် သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံခြုံစိတ်ချရသောသူများ၏စကားဝှက်တစ်ခုပေးထားသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစကားဝှက်အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းသည် Apple ID အောက်ရှိစက်ပစ္စည်းအားလုံးမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့် Keychain တွင်အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တွင် Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီမှကိရိယာများအမြဲတမ်းရှိနေသည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စများတွင် မည်သည့်စကားဝှက်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်သည် iCloud Keychain ကိုအသုံးပြုရမည် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်သွားလေ့ရှိသည့်ကော်ဖီဆိုင်၏ Wifi စကားဝှက်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်သည်မည်သည့်အရာကိုစစ်ဆေးသည်ကိုစစ်ဆေးရန်၊
iCloud Keychain တွင်သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များကိုကြည့်ပါ
ကျနော်တို့ ဦး တည် Launchpad.
Launchad အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့ရှာသောဖိုင်တွဲကိုရှာသည် အခြားဖိုင်တွဲများ.
ဒီလျှောက်လွှာအတွင်းမှာပဲ၊ iCloud သော့ချိတ် လက်ျာကော်လံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာနေသော Wifi ကွန်ယက်အမည်ကိုရှာသည်။
အောက်ခြေမှာ Show password box ကို check လုပ်ရမယ်။ အောက်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ iCloud Keychain စကားဝှက်ကိုတောင်းလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသော့ချိတ်၏တရား ၀ င်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်။ ထည့်ပြီးတာနဲ့ငါတို့လိုအပ်သောစကားဝှက်ကိုပြသလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » iCloud Keychain တွင်သိမ်းဆည်းထားသောစကားဝှက်များကိုကြည့်ရှုရန်